भक्तपुर नगरपालिकाको ६९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिको मन्तव्य – Bhaktapur Khabar
भक्तपुर नगरपालिकाको ६९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिको मन्तव्य
By Bhaktapur Khabar	 Last updated Dec 19, 2018
भक्तपुर नगरपालिकाको ६९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीहरूलगायत नगरपालिकालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । नगर र नगरवासीको हितमा यहाँहरूले सदाझैं आगामी दिनहरूमा पनि सहयोग गर्ने आशा गर्दछु ।
हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आएको डेढ वर्ष भयो । यस अवधिमा जनअपेक्षाअनुसार धेरै काम गर्न नसके पनि जनताबीच निर्वाचनको समयमा घोषणापत्रमार्फत् गरेका प्रतिबद्धतालाई एक एक गरी पूरा गर्दैछौं । हाम्रो आधार भनेको जनता हुन् । श्रमजिवी जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हामीले काम गर्दैछौं । हामीलाई निर्वाचित गर्ने जनतालाई हामीले कहिल्यै बिर्सनेछैनौं ।
नगरपालिका स्थापना दिवसको अवसरमा भक्तपुर दरबार क्षेत्रस्थित प्रसिद्ध ५५ झ्याल दरबार आजबाट स्वदेशी र विदेशीको लागि पुनः खुला गरेका छौं । स्वदेशीको लागि सामान्य सशुल्क र विदेशीको लागि निःशुल्कको व्यवस्था मिलाएका छौं । यसबाट भक्तपुरप्रति आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्ने हाम्रो विश्वास छ ।
हामीलाई थाहा छ, जनताका असीमित आवश्यकताहरू हुन्छन्, स्रोत र साधनहरू अत्यन्त न्यून छन् । सीमित स्रोत र साधनहरूबाट जनताका सबै समस्याहरू छोटो अवधिमा समाधान सम्भव छैन । यद्यपि संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर एक एक गरी आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकताक्रम तोकी विकास निर्माणदेखि विभिन्न क्षेत्रमा काम सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्दैछौं ।
नगरपालिकाको ६९ औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा विगतभन्दा केही फरक अनुभूति भएको छ । विगतको स्थानीय निकाय अहिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहितको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, कृषि, समाज कल्याण, भेटनरीजस्ता विगतमा केन्द्रीय सरकार मातहत सञ्चालन हुने कार्यालयहरूको जिम्मेवारी पनि नगरपालिकामा आएको छ । संविधान र कानुनले जनताको नजिकको सरकार भनी चिनिने स्थानीय तहलाई अत्यन्त बलियो बनाइदिएको छ । तर केन्द्र सरकारमा बस्ने नेता र प्रशासकहरूमा अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता नै रहेको हु“दा व्यवहारमा स्थानीय तहहरूले केही समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।
संघीय राज्य व्यवस्थामा विकास निर्माणका सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइनुपर्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकार नीति निर्माण गर्ने थलो हुन् । विकास निर्माणको सबै बजेट स्थानीय तहलाई दिएमा जनताको सहयोगबाट विकास निर्माणका कामहरूलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन सहयोग मिल्नेछ । विकास निर्माणको काम ठेक्कापट्टामा दिने ऐन–नियममा सुधार गर्न आवश्यक छ । ठेकेदारले गरेको कामको प्रभावकारी नियमन नहुँदा देशको अर्बौंको विकास बजेट बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ । भ्रष्ट ठेकेदार र इञ्जिनियरहरू दण्डित नभएकै कारण अहिले देशका विभिन्न क्षेत्र बिग्रिरहेका छन् । भक्तपुर नगरपालिका सचेत भएर अधिकांश विकास निर्माणको काम अमानत वा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दै आएको छ ।
भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र, पर्यटकीय गन्तव्यस्थल र सरसफाइको नमुना नगर बनाउने उद्देश्यले जनप्रतिनिधिहरू लागिरहनुभएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको हरेक काममा नगरवासीहरूको निरन्तर साथ र सहयोग प्राप्त भएको छ । हामीलाई साथ र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा यस अवसरमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौं ।
२०७२ सालको भूकम्पले भक्तपुर नगरभित्र मात्रै १३० भन्दा बढी सम्पदाहरूमा क्षति पुग्यो । ती सम्पदाहरूको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दैछ । हालसम्ममा ३६ वटा सम्पदाहरू नगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ भने नेपाल सरकार र पुरातत्व विभागले पनि कतिपय सम्पदाहरू निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । नगरपालिका र पुरातत्व विभागको समन्वयमा बाँकी सम्पदाहरू निर्माणमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।
भनपाले प्रसिद्ध भैरवनाथ मन्दिरको जीर्णोद्धार कार्य सुरु गरेको छ भने केदारनाथ मन्दिर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र वत्सला मन्दिरको काम ५० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसको अलावा वडा–वडामा अवस्थित दर्जनौं पाटी–पौवा, ढुंगेधारा, पोखरी, सतल, मठ–मन्दिरहरूको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेका छन् ।
जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै घर–घरमा नर्सिङ सेवा र वडा–वडामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएका छौं । त्यसबाट महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू लाभान्वित भएका छन् भने प्राप्त रिपोर्टबाट हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । विगतभन्दा नितान्त फरक रोगहरूले नगरवासीहरूको स्वास्थ्यमा घर जमाउन थालेका छन् । क्यान्सर, चिनीरोग, उच्च रक्तचाप, थाइरोइडजस्ता नसर्ने रोगहरू बढी देखिएका छन् । यसबारे सचेत पार्न स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविरलगायतका गतिविधिहरू पनि नगरपालिकाले गर्दै आएको छ ।
विभिन्न कलेजहरू सञ्चालन गरी सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्थानीय राजनीति, इतिहास, भूगोल, खेलकुद, संस्कृति समेत विद्यालय तहबाटै अध्यापन सुरु गरेको छ ।
कला–संस्कृतिले भरिएको भक्तपुर विस्तारै पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रुपमा परिचित हुँदैछ । गत आ.व. २०७४/७५ मा साउनदेखि मंसिरसम्मको ५ महिनाको अवधिमा विदेशी पर्यटकहरूको संख्यामा २० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । चिनिया“ पर्यटककहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको हुँदा नगरपालिकाले चिनियाँ भाषाको तालिम कक्षा पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । २०७५ साल कार्तिक २९ गते जनवादी गणतन्त्र चीनका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री लुओ सुकाङको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले भक्तपुरको अवलोकन भ्रमण गर्‌यो । मन्त्री सुकाङले दरबार क्षेत्रको भ्रमणपछि ‘भक्तपुर विश्व सम्पदामा सूचीकृत सहर भएको र चिनिया“ पर्यटकहरूको तीर्थस्थलको रुपमा रहेको’ भनी भक्तपुरको प्रशंसा गर्नुभयो । यसबाट नेपाली र चिनियाँ जनताबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जाने विश्वास छ ।
त्यसको अलावा भक्तपुर नगरपालिकाले नेपालभाषा लिपी, सिल्पकलाजस्ता सीपमूलक तालिम र कृषिसँग सम्बन्धित माटो परीक्षण, गद्यौला मल बनाउने, च्याउ खेती, बेमौसमी तरकारी उत्पादन, विषादी प्रयोग विधिलगायतका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै स्थानीय युवाहरुलाई लक्षित गरी स्थानीय पथ प्रदर्शक तालिम पनि संचालन गरेका छौं ।
खेलकुद विकासको लागि निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार गत वर्ष अन्तरनगर भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न गरेकोमा यो वर्ष अन्तरनगर कराँते प्रतियोगिता गर्ने तयारी गरेका छौं । अन्तर विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता २०७५ कार्तिक ११ गतेदेखि १७ गतेसम्म सम्पन्न भयो । ७० विद्यालयले भाग लिएको उक्त प्रतियोगितामा १८०० भन्दा बढी खेलाडी विद्यार्थीहरू सहभागी भएका थिए ।
विद्यार्थीहरूको अध्ययनको क्षेत्र व्यापक बनाउन र गतिविधिमा सक्रिय बनाउन विश्व सर्वहारा वर्गका महान गुरु कार्ल माक्र्सको द्विशतवार्षिकीको अवसरमा पुस ८ र ९ गते निबन्ध लेखन तथा वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको आयोजना गरेका छौं । कक्षा ११ र १२ तथा कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीहरूलाई छुट्टाछुट्टै विषय दिएका छौं । कक्षा ९ र १० को लागि ‘वैज्ञानिक समाजवाद आजको आवश्यकता’ र ‘कला संस्कृति संरक्षणमा भक्तपुर नगरपालिका’ विषयक निबन्ध प्रतियोगिता हुने र कक्षा ११ र १२ को लागि ‘समाजवादी शिक्षा व्यवस्था : आवश्यकता र महत्त्व’ तथा आधुनिक समाज विकासमा माक्र्सवादी दृष्टिकोण विषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको आयोजना गरेका छौं ।
हाम्रा परम्परागत बाजा र सांस्कृति विधाहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बाजा गुरुहरूको सम्मान गर्ने, बाजा प्रतियोगिताहरू गर्ने गर्दै आएका छौं । २०७४ सालमा नगरस्तरीय बाँसुरी बाजा प्रतियोगिता सम्पन्न गर्यौं भने २०७५ पुस २१ गते नगरस्तरीय धाँ बाजा प्रतियोगिता गर्ने घोषणा गरेका छौं । हामी अहिले त्यसैको तयारीमा छौं ।
भक्तपुर नगरपालिकाले विदेशीको पैसाबाट सञ्चालन हुने गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । जथाभावी हचुवाको भरमा कुनै पनि संस्थालाई काम गर्न स्वीकृति दिएको छैन ।
खानेपानी, ढल निकास, सडकलगायत सबै विषयमा जनताको आशाको केन्द्र अब स्थानीय तह हुन पुगेको छ । तर खानेपानी र ढलको पैसा केयुकेएलले उठाउने काम जति नगरपालिकाले गर्र्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा गरिरहेको काम अहिले देशभरि चर्चाको विषय बनेको छ । देशका विभिन्न नगरपालिका, महानगर र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूको भक्तपुर भ्रमण र अनुभवको आदानप्रदानले हामीलाई काम गर्न अझ हौसला मिलेको छ । यहाँ जति पनि राम्रा कामहरू भए ती सबै यहा“का जनताको साथ र सहयोगले सम्भव भएको हो ।
भनपाको हरेक गतिविधि जनतालाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले ‘भक्तपुर’ मासिक पत्रिकालाई निरन्तरता दिंदै ‘ख्वप पौ’ नेपाल भाषा प्रकाशन पाक्षिक रुपमा सुरु गरेका छौं । फेसबुक पेज, भक्तपुर खबर अनलाइन पत्रिका, ‘ख्वप सः’ एफ.एम.मार्फत् हप्ताको दुई दिन प्रसारण गर्दै आएका छौं ।
हाम्रा हरेक सानाभन्दा साना गतिविधि जनताले जानकारी पाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । निरन्तर सही सल्लाह र सुझाव दिएर जनताको सेवा गर्ने हाम्रो भावनामा ऊर्जा थप्ने तमाम जनता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
(भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाको ६९ औ स्थापना दिवस समारोहमा दिनुभएको मन्तव्य)
के हामी गौरव गर्न लायक पुस्ता बन्न सक्छौं ?
भक्तपुर नगरपालिका ६९ वर्षमा प्रवेश